WHO oo ka hadashay dhibaatada caabuqa Faafa ee Coronavirus - Awdinle Online
WHO oo ka hadashay dhibaatada caabuqa Faafa ee Coronavirus
4 April, 2020 (Awdinle Online) –Madaxa Ururka Caafimaadka Adduunka ayaa sheegay Jimcihii in cudurka faafa ee coronavirus uu dhaliyay xiisad caalami ah oo sababi doonta dhibaatooyin fara badan oo ka baxsan Kiisaska iyo kordhinta tirada dhimashada.
“Waan ognahay in tani ay ka badan tahay dhibaato caafimaad,” ayuu yiri agaasimaha guud ee WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus shir-jaraa’id oo ka dhacay Geneva. “Waxaan wada ognahay cawaaqib xumada bulshada iyo tan dhaqaale ee masiibada.”
Tedros ayaa sheegay in ka badan 1 milyan oo kiis ah iyo in kabadan 50,000 oo dhimasho ah oo adduunka oo dhan laga soo tabiyay.
Laakiin sarkaal sare oo ka tirsan wasaarada caafimaadka Australia oo lagu magacaabo Brendan Murphy ayaa u sheegay suxufiyiinta in magaalada Sydney in tirada kiisaska adduunka ay runtii 10 jeer ka sarreeyaan tirade la soo tabiyay.
“Adduunyada oo dhan waxaa la soo sheegay 1 milyan oo kiisas ah. Laakiin waxaan aaminsanahay in tirada dhabta ahi ay shan ama 10 jeer ka badan tahay,” ayuu yiri Murphy. Wuxuu sheegay in warbixinnada aan la soo tabin ee kiisaska ay sabab u tahay baaritaanno yar oo ku saabsan cudurka dilaaga ah ee Covid-19.
Tedros wuxuu sheegay in waddamada qaarkood “ay joojinayaan khidmadaha adeegsadaha ayna bixiyaan imtixaan bilaash ah … iyadoon loo eegin caymiska qofka, dhalashada ama sharciga deganaashaha,” wuxuuna ugu yeeray waddamada kale inay raacaan sharciga.
WHO waxa ay u sheegtey waddamada in ay si weyn kor ugu qaadaan baaritaanada COVID-19, halka kormeerayaasha caalimiga ah qaarkood ay ogaadeen kala duwanaanshaha habka ay waddamada qaar u tiriyaan kiisaska xanuunka.
Tedros waxa uu sheegay in waddamada qaarkood “ay joojinayaan khidmadaha adeegyada ee ay ku bixiyaan tijaabinka bilaash ah … iyadoon loo eegin caymiska qofka, dhalashada ama sharciga deganaashaha,” wuxuuna ugu yeeray waddamada kale in ay raacaan sharciyada Caalamiga ah.
Muhiimadda tijaabada loo xoojiyay ayaa ah markii hogaamiyaha Xisbiga Shuuciga ee Wuhan, Shiinaha, uu ka digay halista suurtagalnimada dib-u-soo-noolaashaha Xanuunka weli waa mid sarreysa oo ay tahay in tallaabooyinka ka hortagga iyo xakamaynta ay sii socdaan ayuu wariyayaasha u sheegay. Wuhan ayaa ahayd halka uu ka dillaacay cudurku December 2019.
Isaga oo ka hadlayey warbixin kooban oo ay siisay hay’adda caafimaadka adduunka ee WHO, Agaasimaha Maareynta Lacagta aduunka Kristalina Georgieva “Hadda waxaan ku jirnaa hoos u dhac dhaqaale. Waxa ay ka xun tahay xiisadii dhaqaale ee adduunka (2008). “waxa aan u baahanahay wada shaqayn joogto ah”.
Previous articleIsku shaandhayn lagu sameeyay talisyada booliska dowlad goboleedka puntlan
Next articleKuwait oo xaqiijisay dhimashadii ugu horeysay ee Corono Virus
Xarunta wadaadkii Cabdiweli Cilmi Yare Oo Galmudug la Wareegtay
Ciidamo Ka Tirsan Itoobiya oo Qaraxyo Lala Eegtay
Afduub ka dhan ah Axmed Madoobe oo qorsheynaya Itoobiya & Eritrea
Somaliland Oo Maanta Shaacisay Kiisas Hor Leh Oo COVID-19 Ah
Xildhibaannada Federaalka ee ka soo jeeda Somaliland oo MW Farmaajo ku eedeeyay faragelinta doorashadooda.
132-ruux oo ku xayirneyd Sacuudiga DFS oo dalka dib ugu soo celisay.
5 eray oo ay dhibsatay’ Villa Somalia oo shaqadiisa ku waayey Dr. Walters Samah
Xildhibaan Mahad Salaad “Madaxda dowladda kama hadlin dhacdadii deegaanka Gololey,
Falkii Lagu Laayey Shaqaalahe caafimad oo Hayádda ZAMZAM War Ka Soo Saartay